Wadi Rum - Socod dhex mara Dooxada lamadegaanka ee dayaxa | Safarka Absolut
Koonfurta Urdun waxaan kula kulannaa waxa loogu yeero Waadi Rum. In kasta oo kuwa kale oo badani ay iyaguna u yaqaanaan Dooxada Dayaxa. Laba siyaabood oo lagu ogaan karo dooxada lamadegaanka ee ku taal gobolka buuraleyda ah. Dhexdeeda, waxay noqon doontaa dhagax adag iyo dhagaxa ciida ee sameeya. Haddii aan rabno inaan turjumaad u siino magacaaga, sidoo kale waa mid aad u fudud.
Wadi Rum wuxuu noqdaa kanaal sare. Maadaama Wadi loola jeedo sariiro qulqulaya sidoo kale wabiyada, halka Rum macnaheedu yahay mid sare ama mid sare. In yar oo aan ka ogaanno waxa aan ka heli doonno, waxaan ogaan doonnaa wax walba oo ay na siiso. Meel gaar ah oo leh dhaxal weyn.
1 Sida loo tago Wadi Rum
2 Taariikhda Wadi Rum
3 Maxaan ka heli doonnaa Wadi Rum?
4 Lawrence of Arabia iyo filimaan kale oo ku jira Wadi Rum
5 Tabaha tixgelinta la siinayo
Sida loo tago Wadi Rum
Cidladani waxay ku saabsan tahay 60 kiiloomitir u jirta Aqaba. Kaas oo u turjumaya saacad baabuur. Laga yaabee, inaad tahay aag cidla ah, waxaa ugu wanaagsan in la doorto taksi kuu geyn doona bilowga xiisahaaga. Caqli ahaan, kadib bixinta qiyaastii 30 euro. Taksiga ayaa kaa dejin doona waxa loogu yeero Xarunta Booqdayaasha, taas oo aad uga raaxeysaneysa safarka laftiisa iyo jadwalka. Halkaas waxaad ka heli doontaa macluumaad iyo adeegyada ay kuugu deeqi doonaan inaad safar ammaan ah ku dhex marto dalalkan.
Taariikhda Wadi Rum
Waxaa la sheegaa in aaggan ay deganaayeen dhaqamo kala duwan iyo waqtiyadii hore. Dhammaan xogtaasi waxay ahaayeen ku xardhan dhagaxyada sida petroglyphs. Laakiin tan iyo 2000 waa qabiilooyinkii reer baadiyaha ahaa ee qabsaday meeshan. Iyagu waa kuwa mas'uulka ka ah fulinta himilooyinka dalxiiska ee dhammaan soo-booqdayaasha doonaya inay galaan cidla sida cajiibka u ah tan.
Haddii safarkaagu ka yimid Amman oo aad sidoo kale rabto inaad aragto Jordan, markaa way ka fiicantahay inaad kireysato gaari. Waxay had iyo jeer ku xirnaan doontaa barta aad ka bilaabaneyso iyo maalmaha ama meelaha aad rabto inaad ku raaxeysato. Tusaale ahaan, ka yimid Petra waxaa jira bas ka tagaya waxa ugu horeeya subaxa hore.
Maxaan ka heli doonnaa Wadi Rum?
ka qaab dhismeedka dhagaxa waxay u muuqan doonaan sidii meel aan jirin. Iyagu waxay kuu noqon doonaan aragtidaada ugu wanaagsan, cidlada oo dhan. Intaa waxaa dheer, waxay leedahay midab guduudan oo had iyo jeer aad u cajaa'ib badan. Waad fuuli kartaa qaar ka mid ah dhagaxyada, laakiin dabcan waxay noqon doontaa mid geesinimo leh, khatar badan oo aan lahayn vertigo. Haddii aad hesho, aragtidu aad bay u qurux badan tahay. Haddii aad si dhow u fiirsato, waad bixi kartaa ogaanshaha petroglyphs ah in aan kor ku soo sheegnay. Qoraallada iyo haraaga ilbaxnimooyinkii hore ayaa aad ugu sugan meeshan. Haddii aad u ogolaato naftaada in lagaa qaado iyadoo laguu tilmaamayo tilmaamahaaga, xitaa waxaad ku raaxeysan kartaa waqti aad u xiiso badan oo jimicsi lagu sameeyo. Haa, maadaama uusan baraf jirin laakiin ay jiraan ciid badan, waxba kama jecla inaad ka faa'iideysato inaad sameyso sabuurad dhigid. Hab asli ah oo dhex mushaaxaya ciidda.
Iyada oo gunaanad ah in maalin Wadi Rum, wax lamid ah sugitaanka qorrax dhacaaga. Hagahaaga ayaa hubaal kaala talin doona layaabna ma leh. Waa dareen ka duwan, inaad ku raaxeysan karto daqiiqad sidan oo kale ah, meel sidan oo kale oo sixir ah. Waxay leedahay dhammaan walxaha kaa yaabi kara iyo wax badan. Si tan loo sameeyo, waxaad marin u heli kartaa buur oo aad sugi kartaa xilligan. Waqtiyada cuntada, waxaad ku raaxeysan kartaa macmacaan macaan, sidoo kale waxaa diyaariyey reer baadiyaha. Waa hubaal, hilibka iyo digaagga weligood ma maqna, fiidkiina badanaa waxaa lagu soo kordhiyaa heesaha caanka ah. Dabcan, hal mar halkaa, waxaad had iyo jeer ku sameyn kartaa qayb ka mid ah dariiqa geela.
Lawrence of Arabia iyo filimaan kale oo ku jira Wadi Rum
Haa, filimka «Lawrence of Arabia» waxaa lagu toogtay aaggan. Wuxuu ahaa filim 1962 ku saleysnaa nolosha TE Lawrence waxaana la sheegay inuu kamid yahay filimada ugu wanaagsan abid. Hagaag, markaad ku sii socoto meeshan, waxay kuu qaadi doonaan meelaha muhiimka ah ee filim duubista la sheegay. Gaar ahaan guga oo u muuqda isha nolosha filimka. Laakiin maahan oo kaliya inay qaadatay tallaaladii ugu fiicnaa ee lamadegaanka. Sidoo kale "Mission to Mars" laga bilaabo sanadka 2000 ama, "Meeraha cas" iyo "The Martian" ayaa lagu duubay meeshan sixirka ah. Goob ay si aad ah u jecelyihiin adduunka shineemo laakiin sidoo kale dalxiisayaasha.
Tabaha tixgelinta la siinayo
Safarada: Sidaan soo sheegnay, inkasta oo ay umuuqato meel kali kali ah, hadana majiraan wax xaqiiqda ka fog. Booqashooyinka waxaa lagu sameyn karaa gaari jiilaal ama geel ah, hadaad doorbido Waxaad sidoo kale ku raaxeysan kartaa isboortiyo kala duwan iyo raacitaanno buufin ama astaamaha dambe. Fuulitaanka sidoo kale waa ikhtiyaar kale oo aad haysato. Dabcan, si fiican horay u sii ogow oo wax walba iskaga tag.
Qiimaha: Hal saac oo ka mid ah raac taksiga waxay marayaan 30 euro. Haddii aad kireysato xirmo dhammeystiran, markaa waxaad ku yeelan doontaa waxqabadyo dhowr ah iyo hoy teendho ah. Qiimayaashu way kala duwanaan karaan laakiin waxay ku bilaaban doonaan ugu yaraan 35 euro.
Biyo: Waxaan ka hadleynaa lamadegaan, sidaa darteed biyo la'aan waa wax aan wada ognahay. Waxaa ugufiican in lagaarsiiyo, in kasta oo ay run tahay inaad la kulmi doonto reer baadiyaha oo ku siin doona shaah ama biyo. Fadlan xidho dhar raaxo leh oo fudud. Badanaa waa mid aad u kulul, sidaa darteed ilaalinta qorraxda ayaa sidoo kale aad loogu talinayaa.
Kaamam: In kasta oo aan horay u soo sheegnay inaad habeenkii ku hoyan kartid qaab kaambeyn ah, xusuusnow inaad ka taxaddarto hangarallayaasha. In kasta oo maalintii aan la arkin, haddana waa. Gudaha meelaha kaamamka waxa ay qabtaan ayaa ah baaruud hareeraha dukaamada, si looga ilaaliyo inay soo muuqdaan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Safarka Absolut » Waadi Rum
Meelaha ugu wanaagsan ee Madrid